Архивы Akụkọ bara uru - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Category: Edemede bara uru 0
Basil Thai bụ ụdị basil nke sitere na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọ nwere ekpomeekpo siri ike karịa nke nwanne nwanne basil ya na-atọ ụtọ nke nwere ọtụtụ ihe…
Vietnam nwere ọdụ ụgbọ mmiri 320 nke 163 bụ ọdụ ụgbọ mmiri mba ụwa. Otu n'ime ha bụ ọdụ ụgbọ mmiri Saigon nke bụ sistemụ ọdụ ụgbọ mmiri na Ho Chi Minh City. Saigon…
Ọdụ ụgbọ elu Obodo Obodo United States Los Angeles Ọdụ Ụgbọelu Mba Nile Los Angeles Newark Newark Liberty International ọdụ ụgbọ elu New York City John F. Kennedy International ọdụ ụgbọ elu San Francisco San Francisco…
Ị nwere ike na-abụ Happy Birthday na Thai? Ọ ga-adị ka nke a ka edere ya na Thai: 'obi ụtọ bertday' (แฮปปี้เบิร์ธเดย์). Oh, ma ha ka na-abụ abụ 'obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ' nke…
Ebumnuche bụ isi nke agụmakwụkwọ anụ ahụ bụ: ịzụlite ikike moto dị ka ike, ọsọ, ntachi obi, nhazi, mgbanwe, ike na nguzozi, ebe ọ bụ akụkụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma…
Selangor, mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Malaysia (Malaya), bi n'akụkụ ala mmiri dị n'ụsọ oké osimiri na Strait nke Malacca. Selangor ọ dị na East ma ọ bụ West Malaysia? kilomita) na…
Azịza kachasị mma: Gịnị kpatara ndị Indonesia ji hụ nri ose n'anya?
N'Indoneshia, a na-ekwenyekwa na ose na-eme ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ na ahụ riri ahụ. A na-ahụta uto oseose nwere ike ịhapụ mmetụta nke nchekasị n'ime ahụ…
Ego ole bụ stampụ obodo 1st Singapore?
Arọ Range Standard Regular Mail Ozi Ọkọlọtọ Oge Edebara aha 1g ruo 20g $0.30 (Mpaghara nke mbụ) $1 2.54g ruo 21g $40 (Ogbe nke abụọ) $0.37 Ego ole bụ mpaghara mbụ…
Ị jụrụ: Thailand ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya taa?
The Economist Intelligence Unit kwuru na Thailand "ọchịchị onye kwuo uche ya nwere ntụpọ" na 2019, mmụba dị ukwuu nke isi 1.69 (nke 10.00) site na afọ gara aga; ọ gara n'ihu…
Malaysia ọ bụ ezigbo obodo ịkwaga?
Malaysia bụ obodo dị ọnụ ala ibi na ọ bụrụ na ị nọ na ụgwọ ezumike nka site na mba mepere emepe ị ga-ahụ na ọ na-enye nnukwu ihe…
1 2 ... 307 Osote
Ego ole ka onye na-agba Foodpanda na-enweta na Philippines?
Ị jụrụ: Gịnị bụ akara maka peso Philippines?
Ị jụrụ: Kedu ka m ga-esi bupu ụgbọ ala na Vietnam?
Azịza ngwa ngwa: Enwere ndị na-amụ nwa na Philippines?
Kedu mpaghara Sapa dị?
Kedu steeti kacha ochie na Malaysia?
Kedu ihe dị ka Angkor Wat?